Ndezvipi zvinoshandiswa nealuminium tepi |
Ndezvipi zvinoshandiswa nealuminium tepi
Kana zvasvika kune aluminium tepi, ndinotenda iwe unofanirwa kunge uchiziva nayo. Muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, tinogona kazhinji kuona zvigadzirwa zvemagetsi zvigadzirwa. Izvi zvinotevera sumo pfupi yekushandiswa kwealuminium tepi?
Chekutanga pane zvese, iyo tepi yealuminium inogadzirwa nemhando yepamusoro yekumanikidza-inonamira. Uye zvakare, iyo aruminiyamu foil ine hunhu hwepamusoro-tembiricha yekudzivirira uye mweya kubvumidzwa, saka ine yakanaka kupisa kuchengetedza maitiro uye inoratidzira maitiro, ayo anogona kuiswa muhupenyu hwedu, hovhoni uye microwave ovhoni. Ehezve, pachavezve nekushandisa kwakawanda muindasitiri yemotokari.
Nyowani era mupepeti inounza akati wandei kiyi zvigadzirwa zvealuminium pepa
（1, Air kutonhodza foil
Mhepo inodzora firipi chinhu chakakosha chekugadzira kupisa chinjana chemhepo yekuisa mweya. Yekutanga yakashandiswa air conditioner foil yakajeka. Kuti uvandudze mamiriro epamhepo yakajeka, anticorrosive inorganic bemhapemha uye hydrophilic organic coating yakavezwa isati yaumbika kuti iumbe hydrophilic foil. Parizvino, hydrophilic foil account ye50% yeiyo yakazara mhepo yekugadzirisa mhepo, uye chiyero chayo chekushandisa chichawedzeredzwa.
（2, Midzanga yekuisa mapepa
China ndiyo inogadzira fodya uye mutengi pasi rose. Parizvino, pane mafekitori emidzanga mahombe gumi nematanhatu muChina, aine mabhiriyoni makumi matatu nemana emabhokisi. Chaizvoizvo, fodya firipi yekupakata inoshandiswa, iyo iyo 30% isprayed coated foil, 70% iri calendered aluminium foil, uye kushandiswa kweakaumbiwa aruminiyamu foil ndeye 35000 matani. Nekuvandudzwa kwehutano hwevanhu uye hunhu hwefodya yakatumirwa kunze, kukura kwefodya firita yekuda kuri pachena kudzikira, iyo inotarisirwa kuve padyo neIyo ichawedzera zvishoma mumakore mashoma.
） 3, Decorative foil
Aluminium foil imhando yezvinhu zvekushongedza zvine hunyoro hwekuratidzira. Inonyanya kushandiswa pakushongedza kwemapurani uye fenicha uye kurongedza kwemamwe mabhokisi echipo. Iko kushandiswa kwekushongedza foil muChina yekuvaka indasitiri kwakatanga muma1990. Yakapararira nekukurumidza kubva kuShanghai, Beijing, Guangzhou nemamwe maguta epakati kuenda kumatunhu ese enyika. Mumakore achangopfuura, kudiwa kwekushongedza foil kwakawedzera zvakanyanya. Kazhinji, sechinhu chekushongedza chemadziro emukati ezvivakwa nemidziyo yemukati, inoshandiswa zvakare musuwo nekushongedzwa kwemukati kwemasangano ezvokutengeserana.
Intertape Polymer Boka Aluminium Foil Tepi, Iyo Inopisa Sei Inogona Aluminium Foil Tepi Tora, Yakapetwa-Yakatsigirwa Yakasimbiswa Aluminium Foil Kutarisana, Aluminium Foil Girazi Yejira Tepi, Imwe-yakatsigira Aluminium Foil Kutarisana, Tepi,